लिदी पहिरो अपडेटः मृतकको संख्या १३ पुग्यो, बेपत्ता २६ जना अझै भेटिएनन् ! « Rara Pati
लिदी पहिरो अपडेटः मृतकको संख्या १३ पुग्यो, बेपत्ता २६ जना अझै भेटिएनन् !
३१ साउन, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामास्थित लिदी गाउँमा शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ पुगेको छ । शनिबार बिहान थप २ जनाको शव भेटिएपछि मृतकको संख्या १३ पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार अधिकारीले बताए ।
पहिरोमा परेर बेपत्ता २६ जनाको शव अझै भेटिएको छैन । सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रज्वल महर्जनले हराइरहेका २६ जनाको बिहानैदेखी खोजि कार्य भइरहेको जानकारी दिए । हिजो शुक्रबार भेटिएका ११ जना मृतकको सनाखत भइसकेको छ भने आज भेटिएका थप २ जनाको पनि सनाखत प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारयण श्रेष्ठका अनुसार पहिरोले १३ वटा घर पूर्णरुपमा पुरिएका छन् भने ३७ घरमा क्षति पुगेको छ । पहिरोले विस्थापित स्थानीय गुमाएका आफन्त र गाउँलेको पिडा सहदै त्रिपालमुनी बस्न बाध्य छन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पले क्षतविच्क्षत भएको लिदी यसअघि नै मानव बस्तिका लागी अयोग्य रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घोषणा गरिसकेको थियो । तर सरकारले बेलैमा स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण नगरेका कारण ठुलो जन धनको क्षति भएको छ ।
लिदी पहिरो अपडेट